Karman's Yepasi Pose Chakavanzika Chiziviso
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa: Kurume 9th, 2020
Kuvanzika kwako kwakakosha ku Karman, saka isu takagadzira Global Chakavanzika Chiziviso ("Cherechedzo") iyo inotsanangura maitiro atinounganidza, kushandisa, kuzivisa, chinja, chengeta, uye chengetedza ruzivo rwako rwega kuitira kuti iwe uwane zvese zvaunoda kuti uite sarudzo dzakakukodzera iwe kana kushandisa yedu mavhiripu kana masevhisi. Isu takazvipira kutevedzera nemitemo inoshanda inodzivirira dhata nemitemo yenyika inoshanda munyika maunogara, kwaunoshanda kana neimwe nzvimbo yaunogara ("Anoshanda Mutemo").
Cherechedzo ichi chinoshanda kune iyo Mawiricheya dzakanyorwa mune Yedu Zvigadzirwa Chikamu pamwe nezvimwe Karman Mawiricheya ayo anoreva kuChiziviso ichi. Kana richishandiswa, izwi rekuti "Zvigadzirwa" rinosanganisira Karman nemasevhisi ayo 'kana vanobatana' masevhisi, mawebhusaiti, maapplication, software uye zvishandiso. Kuti tikubatsire iwe kuwana iyo ruzivo rwaunoda, isu takakamura Cherechedzo ichi muzvikamu zvinoenderana.
Iwe une dzimwe kodzero dzine chekuita nekuti sei Karman inoshandisa ruzivo rwako pachako. Iwe unogona kuverenga nezvekodzero dzako muchikamu cheKodzero dzako uye Sarudzo uye unogamuchirwa kuti utibate.
Ndiani ari Mutongi Kana Tikagadzirisa Rwako Ruzivo?
Kana rashandiswa, izwi rekuti "Mutongi" rinosanganisira iye munhu kana sangano rinoona zvinangwa zvekugadzirisa ruzivo rwemunhu, kusanganisira nzira yazvinoitwa nayo. Rini Karman inoshandisa ruzivo rwako kune zvinangwa senge edu epamhepo masevhisi, kuitisa kugadzirisa uye kugadzirisa, uye kuitisa zvimwe zvekushambadzira zviitiko, isu tinoita seMutongi.
Kana rashandiswa, izwi rekuti "processor" rinosanganisira munhu kana sangano riri kuita basa richiitirwa pachinzvimbo chemutongi. Kana Karman agamuchira ruzivo rwako kubva kumutengesi kana mutengesi kuti avake chigadzirwa chako chakasarudzika, isu tiri kuita seProsesa pachinzvimbo chavo.
Ndeapi Ruzivo Ratinounganidza Nezvewe?
apo kushandisa yedu Mawiricheya kana kudyidzana nesu, tinotora ruzivo nezvewe isu rwatinoshandisa zvakasiyana zvinangwa. Izvi zvinangwa zvinosanganisira kukupa iwe nemasevhisi awakumbira uye nekutaurirana newe, asi zvakare kusimudzira yedu Mawiricheya uye kuvaita nani.
Isu tinounganidza ruzivo rwemunhu nezvako kana iwe ukaisa odha kumutengesi wako kune chero chedu Mawiricheya. Isu tinozviunganidzawo kana iwe uchinyoresa kune chero edu epamhepo masevhisi. Isu tinounganidza ruzivo rwemunhu kuumba, kushandisa nekuvandudza yedu Mawiricheya, inokupa iwe zviitiko zvehukama, uye zvinobatsira kukuchengetedza. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve mashandisiro atinoita ruzivo rwako, ndapota ona zvikamu zvakanzi Tinoshandisa Sei Ruzivo Rwako? uye Yedu Mawiricheya.
Isu tinounganidza anotevera zvikamu zvemunhu ruzivo zvichienderana nechigadzirwa kana sevhisi iwe yaunoshandisa:
Chitupa ruzivo runosanganisira zita rako rekutanga, zita rekupedzisira, zita rekushandisa kana chinongedzo chakafanana, zuva rekuzvarwa, uye mukadzi. Tinounganidza ruzivo rwekuzivikanwa kana iwe, mutengesi wako, kana chiremba wako achisvika kwatiri kuti uwane rubatsiro, kana iwe uchiita chikumbiro, kana kana iwe uchiisa chichemo. Mune zvimwe zviitiko, isu tinogashira ruzivo rwako rwekuzivikanwa kubva kumutengesi wako kana kiriniki kana chako chigadzirwa chaiswa.
Ruzivo rwekubata runosanganisira yako email kero, kero yekutumira, kana nhamba dzenhare. Isu tinotora ruzivo rwako rwekuonana kana iwe ukasvikira kwatiri kune masevhisi, kuita chikumbiro, kana kuisa chichemo. Mune zvimwe zviitiko, tinogamuchira ruzivo rwako rwekuonana kubva kumutengesi wako kana kiriniki kana wako wiricheya order inoiswa. Muzviitiko zvakawanda, tinotora ruzivo urwu seprosesa kana bhizinesi shamwari yemutengesi kana chiremba. zvisinei, pane zviitiko apo patinoita seanodzora kana asina-akafukidzwa mubato wezvehutano mutapi kana tichigadzirisa ruzivo urwu, senge kubata chichemo, kugadzirisa chigadzirwa, maitiro e accounting, nezvimwe.
Munguva yekutarisa kwevatengi, isu tinotora zviyero zvemuviri wako kuti tikupe iwe wiricheya tsika kukodzera kune ako maratidziro uye zvaunoda. Paunenge uchiraira zvimwe zvigaro uye zvigadzirwa zvekumisikidza, isu tinoita yekumanikidza poindi mepu ku tsika kukodzera zvigaro zvako nekumisikidza zvido.
Transaction ruzivo rwune ruzivo nezve iwe odha nhoroondo, kusanganisira zvigadzirwa uye zvikamu, uye zvimwe zvimwe zvigadzirwa uye masevhisi awakatenga kubva kwatiri.
Usati wanyoresa kuti uwane software uye maapplication ako, iwe kana chiremba wako uchazoda kunyoresa kuaccount nechigadzirwa ("Basa reMushandisi"). Ruzivo rwunounganidzwa mukutora kunosanganisira zita rako uye email kero. Yako Yevashandisi Basa inoenderana nekutenderwa naKarman. Paunenge uchangonyoresa uye rako reMushandisi Rakabvumirwa, unozogamuchira zita rekushandisa nephasiwedi.
Ruzivo rwehunyanzvi rwunosanganisira internet protocol (IP) kero, chako chinzvimbo chekupinda, browser mhando uye vhezheni, nguva yenguva yekumisikidza uye nzvimbo, browser plug-in mhando uye shanduro, inoshanda system uye chikuva uye humwe hunyanzvi pane zvishandiso zvaunoshandisa kuwana ino webhusaiti uye zvigadzirwa zvedu zvepamhepo.
Ruzivo rwekushandisa runosanganisira ruzivo nezve mashandisiro aunoita webhusaiti yedu, zvigadzirwa nemasevhisi. Izvi zvinosanganisira yako zvigaro uye yekumisikidza regimen kana iwe uchinyoresa kune Virtual Seating Coach.
Kana iwe wakanyoresa kune chero eedu epamhepo masevhisi, isu tinotora ruzivo takamiririra kiriniki kana wezvehutano mutapi wawakasarudza kuendesa nekuchengetedza kwedu Mawiricheya, kusanganisira ruzivo nezve kushandisa kwako kwedu Mawiricheya, ndokumbirawo uone iyo Yedu hwiricheya chikamu cherumwe ruzivo nezve rudzii rweruzivo rwunoenderana neyedu Mawiricheya izvo zvatinounganidza.
Mukuitisa bhizinesi, isu tinogamuchira nekugadzira zvinyorwa zvine mashoma ruzivo rwehutano. Chero ruzivo rwehutano rwakatorwa harusanganiswi ne data kubva kune zvimwe Zvigadzirwa kana kushandiswa kune zvimwe zvinangwa pasina mvumo yako yakajeka. Semuenzaniso, isu hatizoshandise ruzivo rwako rwehutano kushambadza kana kushambadza Zvigadzirwa kwauri kwauri pasina mvumo yako yakajeka.
Karman inopa zvigadzirwa-zvinobva panzvimbo zvinoda mvumo yako yakajeka usati waitwa. Kupa izvi zvigadzirwa-zvinobva munzvimbo, isu tinotora, tinoshandisa, uye tinogovana chaiyo data yenzvimbo newe, muchengeti wako zviri pamutemo, mutengesi wako, kana chiremba wako nemvumo yako. Ruzivo rwakagovaniswa runosanganisira iyo-chaiyo-nguva nzvimbo yenzvimbo yako wiricheya panoshandiswa GPS. Iwe unogona kuvhura kana kudzima nzvimbo yekuunganidzwa kwedatha pane chako chishandiso mune My Karman smartphone app, pane My Karman webhusaiti, nekutaura kune wako mutengesi, kana nekutibata nesu.
Mashoko kubva kumagetsi sensors
Karman asaita magetsi maguru nema sensors ayo achaunganidza data nezve yako nzvimbo, wiricheya mileage, chinzvimbo chebhatiri, ruzivo rwekuchengetedza, data rekuongorora, uye data rebasa nezve Mawiricheya yaunoshandisa uye unogamuchira kubva kuKarman paunovhurwa. Aya ma sensors haashande panguva yaunogashira simba rako wiricheya uye inogona kuiswa pachikumbiro chako. Wako mutengesi anogona kukupa iwe ruzivo rwekuti ungamise sei iyo kifaa sensor.
Ruzivo nezve kushandisa kwako kwedu Mawiricheya inounganidzwa pano neapo pachinzvimbo chekiriniki yako kana mubatsiri wezvehutano kuti akubatsire pakurapwa kwako kwakasarudzika. Zvichienderana neChigadzirwa chedu, unogona kudzora kuti ndeipi sensor yedhijitari uye maapplication aunogona kushandisa nekubata mutengesi wako kana kutumira email ku privacy@KarmanHealtcare.com.
Rudzi rwe ruzivo rwewe pachako nezvewe isu rwatino tarisa zvinoenderana nemasevhisi uye Mawiricheya yaunoshandisa. Ndokumbira utarise kune Yedu Zvigadzirwa chikamu kune rumwe ruzivo rwakananga maererano neruzivo rwevanhu rungangotorwa neMiti yedu chaiyo.
Karman inochengetera ruzivo rwemunhu kuzadzisa zvinodiwa nemutemo, semuenzaniso maererano nemirau yekuchengetedza mabhuku kana kuzadzisa zvisungo zvekuburitsa zvinotarisirwa neEU Medical Chidimbu Mitemo uye US Chikafu neDrug Administration (FDA) Chigadzirwa Chigadzirwa Vagadziri sezvazvinoshanda kune vashandisi vakasiyana. Kugadziriswa uku kunoenderana nezvisungo zviri pamutemo pasi pemutemo unoshanda. Ndokumbira kuti muone zvikamu zvine musoro unoti Kusungirwa Kwemutemo uye Kuratidzwa Kwemutemo kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvatinoda pamutemo.
Nguva nenguva, tinoshandisa ruzivo rwako pachako kutumira zviziviso zvakakosha, senge kutaurirana nezve iyo Mawiricheya uye shanduko kune edu mazwi, mamiriro, uye marongero. Nekuti urwu ruzivo rwunodiwa kuti Karman achengetedze iyo unhu yeZvigadzirwa zvedu, zvinokuzivisa iwe nezvekodzero dzako dzekuvanzika, kuzadzisa zvibvumirano zvedu newe, uye chengetedza kuchengetedzeka kwako kuburikidza nekushandisa chaiko kwechigadzirwa, haugone kubuda mukugamuchira kutaurirana uku. Uku kugadzirisa kunoenderana nezvakakodzera zveKarman zvinangwa kana chibvumirano chedu newe.
Ruzivo rwega rwedu rwatinounganidza rinotibvumidzawo, kana iwe uri mutengi kwatiri, kukuchengeta iwe uchitumira pane Karman's yazvino zvigadzirwa zviziviso, software kugadzirisa, uye zviitiko zviri kuuya. Kugadziriswa uku kwakavakirwa pakufarira kwedu kwepamutemo kwekutaurirana newe. Aya kutaurirana anosarudzika. Kana iwe usiri kuda kuve pane yedu tsamba yekutumira, iwe unogona kusarudza kubuda chero nguva na kutaura nesu kana nekusarudza nekudzvanya iyo yekuzvinyora link muiyo e-mail.
Isu tinoshandisa ruzivo rwemunhu kutibatsira kugadzira, kuvandudza, kushanda, kununura, nekuvandudza yedu Mawiricheya; uye kuona uye kudzivirira kubva kukanganisa, kubiridzira, kana zvimwe zvisiri pamutemo. Kugadziriswa uku kwakavakirwa pachibvumirano chedu newe kana zvinangwa zveKarman zviri pamutemo.
Isu tinoshandisawo ruzivo rwemunhu pachedu zvinangwa zvemukati sekuongorora, kuongorora data, uye kutsvagisa kusimudzira Kariri Wiricheyas uye vatengi kutaurirana; kumanikidza iyo End Yekushandisa License Chibvumirano ("EULA"); gonesa makiriniki nevapi vevashandi vehutano kuteedzera nekushandira ngarava dzavo dze Karman Zvigadzirwa, kana masevhisi enzvimbo akaitwa; uye kugadzirisa masisitimu ekubhadharisa eKarman Zvigadzirwa. Kugadziriswa uku kwakavakirwa pazvinangwa zveKarman zviri pamutemo, chibvumirano chedu newe, kana kubvumidzwa kwako kwakajeka uye kushandiswa kweMy Karman services.
Isu tinoita kuyedza kwese kwekungoshandisa chete hushoma huwandu hweruzivo rwemunhu hunodiwa pakuita aya mabasa uye muzviitiko zvakawanda, isu tinongoshandisa ruzivo rwakave rwunobviswa-kusazivikanwa, kusazivikanwa, kana kusazivikanwa.
Karman anoshandisa ruzivo rwako kubva kune anoshanda madhizaina sensors kuenda ku:
Ipa kiriniki yako kana mupi wezvehutano nezve mhinduro yekuti ungashandisa sei uye riini zvigaro zvemagetsi zvechigadzirwa chako sesimba tilt, Simba rakatsenhama, kana simba rinosimudza gumbo rinozorora. Uku kugadzirisa kunoenderana nemvumo yako yakajeka uye kushandiswa kweMy Karman services.
Kukupa iwe nerutsigiro rwekushandisa kwako kwakasiyana kweKarman Zvigadzirwa, sekugadzirisa sevhisi, zvikamu zvinotsiva, uye nerubatsiro rwehunyanzvi nemasevhisi edu epamhepo. Izvi zvinogadziriswa pachibvumirano chedu newe.
Bvumira vatinesi vedu kuti vavandudze tekinoroji yavo ine marezinesi. Kugadziriswa uku kunoenderana nezvisungo zvepamutemo.
Taura zvipatara zvinoguma. Uku kugadzirisa kunoenderana nemvumo yako yakajeka uye kushandiswa kweMy Karman services.
Ita kuti chigadzirwa chako cheKarman chiteedzerwe nemitemo yechiremba. Kugadziriswa uku kunoenderana nezvisungo zvepamutemo.
Bvumira vatengesi nemakiriniki kuteedzera nekushandira ngarava dzavo dze Karman Mawiricheya. Uku kugadzirisa kunoenderana nemvumo yako yakajeka uye kushandiswa kweMy Karman services. Tevedzera kubhadharisa masisitimu eKarman Zvigadzirwa. Izvi zvinogadziriswa pachibvumirano chedu newe.
Tinotengesa Ruzivo Rwako here?
Kwete. Karman haazotengese, kubvarura, kuendesa, kuzivisa kana neimwe nzira kubvumidza kushandiswa kwemashoko ako ega nevashambadzi kana vamwe vechitatu-bato, kunze kwekiriniki yako kana mupi webasa rezvehutano, kana sezvakarongwa muChiziviso cheChitatu-Mapato chikamu. .
Isu tinochengeta yako data here?
Karman anochengeta ruzivo rwako rwega kwenguva yakareba sekudikanwa kwezvinangwa zvinotsanangurwa muChiziviso ichi. Isu tinochengeta uye kushandisa ruzivo rwako rwega pazvinenge zvichidikanwa kutevedzera edu epamutemo uye ekuraira zvisungo, sekumhan'ara kunodiwa neUS Medical Chidimbu Mitemo uye US Chikafu neDrug Administration (FDA) Chigadzirwa Chigadzirwa Vagadziri sezvazvinoshanda kune vashandisi vakasiyana. Isu zvakare tinochengeta uye kushandisa yako pachako ruzivo sezvazvinodiwa pakugadzirisa kusawirirana uye kuzadzisa zviri pamutemo zvibvumirano uye marongero. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve edu ekuchengetedza maitiro ndapota taura nesu.
Cookies nehumwe Tekinoroji
Isu tinoshandisa vechitatu-bato vanopa rubatsiro kutibatsira isu kuongorora zvimwe zviitiko zvepamhepo uye nekuvandudza Zvigadzirwa zvedu. Semuenzaniso, vanopa sevhisi vanotibatsira kuyera mashandiro eedu Mawiricheya kana kuongorora zviitiko zvevashanyi. Isu tinobvumidza vanopa sevhisi kushandisa makuki kuita aya masevhisi kuna Karman. Vatapi vedu vebato-rechitatu vanofanirwa kutevedzera zvizere Chiziviso ichi.
Ruzivo rwunounganidzwa iInternet Protocol (IP) kero kana zvakafanana zvitupa. Unogona kuseta bhurawuza rako kuti risatambire makuki uye webhusaiti yedu inokuudza mabvisiro ekuki kubva kubrowser yako. Nekudaro, mune dzinoverengeka zviitiko, zvimwe zveedu webhusaiti maficha zvinogona kusashanda semhedzisiro.
Maitiro anoshandiswa kuvharira makuki anoenderana newebhu browser rakashandiswa. Tarisa kune "Rubatsiro" kana inoenderana menyu mune yako webhu browser kuti uwane mirayiridzo. Iwe unogona zvakare kazhinji kushandura marongero zvine chekuita nerumwe rudzi rwekuki. Kuti uwane rumwe ruzivo shanya www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.
Kushandisa kwedu kuki hakuwanzo kuve kwakabatana nechero ruzivo rwemunhu. Nekudaro, kusvika padanho rekuti iyo isiri yemunhu ruzivo inosanganisirwa neyakavanzika ruzivo, isu tinotora iyo yakasanganiswa iyo ruzivo seyakavanzika ruzivo kuitira zvinangwa zveChiziviso ichi.
Mhando dzeKuki Dzinoshandiswa
Makuki anonyanya kudikanwa: makuki aya anodikanwa kuti webhusaiti ishande uye haigone kudzimwa mumasisitimu edu. Iwo anowanzo gadzirirwa chete mukupindura zviito zvakaitwa newe zvinoenderana nechikumbiro chemasevhisi, sekumisikidza zvaunofarira zvega, kupinda mukati kana kuzadza mafomu. Unogona kuseta bhurawuza rako kukuvharira kana kukuzivisa nezve makuki aya, asi zvimwe zvikamu zvesaiti hazvishande. Aya makuki haachengete chero ruzivo rwunozivikanwa.
Performance makuki: aya makuki anotibvumidza isu kuverenga kushanya uye traffic masosi, kuti tikwanise kuyera nekuvandudza mashandiro enzvimbo yedu. Ivo vanotibatsira kuti tizive kuti ndeapi mapeji ari kunyanya uye asinganyanyo kufarirwa uye nekuona mafambiro anoita vashanyi kutenderera saiti. Zvese ruzivo aya makuki anotora akaunganidzwa uye nekudaro haazivikanwe. Ukasatendera makuki aya hatingazive kana iwe wakashanyira saiti yedu uye hatizokwanisa kuongorora mashandiro ayo.
Kushambadzira uye Targeting Cookies: makuki aya anogona kuiswa kuburikidza neyedu saiti nevatinoshamwaridzana navo. Zvinogona kushandiswa nemakambani aya kuvaka chimiro chezvaunofarira uye kukuratidza mashambadziro akakodzera pane mamwe masaiti. Ivo havachengete zvakananga ruzivo rwemunhu asi rwakavakirwa pane yakasarudzika kuratidza yako browser uye internet chishandiso. Ukasatendera makuki aya, uchaona kushambadza kushomeka.
Yemagariro Midhiya Cookies: makuki aya akaiswa neakawanda masocial media services atakawedzera kune ino saiti kuti tikugone kugovana zvirimo neshamwari dzako uye netiweki. Ivo vanogona kuteedzera browser rako kune mamwe masaiti uye kuvaka yavo chimiro chezvaunoda. Izvi zvinogona kukanganisa zvirimo uye mameseji aunoona pane mamwe mawebhusaiti aunoshanyira. Ukasatendera makuki aya unogona kusakwanisa kushandisa kana kuona maturusi ekugovana aya.
Google Analytics uye Quantcast Measure
Isu tinoshandisa Google Analytics uye Quantcast Measure kuchengetedza ruzivo nezve vashanyi vanoshandisa webhusaiti yedu kuitira kuti tigone kugadzirisa uye kupa vashanyi ruzivo rwuri nani rwevashandisi. Google Analytics ndeyechitatu-bato ruzivo rwekuchengetedza system iyo inorekodha ruzivo nezve iwo mapeji iwe aunoshanyira, kureba kwenguva yawanga uri pamamwe mapepa uye webhusaiti zvakajairika, kuti wakasvika sei panzvimbo iyi uye nezvawakadzvanya pauri iwe uripo. Aya makuki haachengete chero ruzivo rwemunhu nezve iwe, senge zita rako, kero, nezvimwe uye isu hatigovane iyo data kunze kweKarman. Unogona kutarisa Google Analytics 'zvakavanzika mutemo pane inotevera chinongedzo: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Iwe unogona kuona iyo yakavanzika yeQuantcast Measure pachiyero chinotevera: https://www.quantcast.com/privacy/
Iyo IP kana Internet Protocol Kero iri rakasarudzika manhamba kero yakapihwa kumakomputa painopinda painternet. IP kero yako yakavharwa kana uchishanyira saiti yedu, asi yedu analytic software inongoshandisa ruzivo urwu kuteedzera kuti vangani vashanyi vatinavo vanobva kumatunhu akasiyana siyana.
Ndeapi matanho epamutemo ekugadzirisa kwedu?
Isu tinovimba pane zvinotevera zviri pamutemo mabhesi ekushandisa yako pachako ruzivo.
Iko kunodikanwa kukupa iwe neyedu zvigadzirwa kana masevhisi, senge:
Kuvaka kana kugadzira chako chakasarudzika chigadzirwa kana iwe ukaisa odha
Kuongorora chako chitupa kana iwe ukabata isu kana kuita chikumbiro
Kugadzira zvekutengesa zvekutenga
Kusimbisa uye kuongorora ruzivo rweodha yako newe, wako mutengesi, kana chiremba wako
Kuvandudza iwe, mutengesi wako, kana mutengesi wako wechiremba pane chinzvimbo cheodha yako, sezvazvinodiwa
Kukubvumidza iwe kunyoresa chigadzirwa chako zvinoenderana neyedu garandi mutemo
Kukupa iwe nehunyanzvi uye vatengi rutsigiro.
Iko kuri mune kwedu kwepamutemo zvido kuita kudaro, senge:
Kugadzirisa zvigadzirwa zvedu nemasevhisi uye kugadzirisa zvinyorwa zvako
Kuita uye / kana kuyedza mashandiro e, zvigadzirwa zvedu, masevhisi uye maitiro emukati
Kuteedzera kutungamira uye kurudziro yakanakisa maitiro ehurumende nematare anotonga
Zve manejimendi uye odhita edu mashandiro ebhizinesi kusanganisira accounting
Kuita kuongorora uye kuchengetedza zvinyorwa zvekutaurirana kwedu newe nevashandi vedu (ona pazasi) • Kutsvaga kwemusika uye kuongorora uye kugadzira nhamba
Zvekushambadzira zvakananga kutaurirana zvine chekuita nezvigadzirwa nemasevhisi. Isu tinotumira kushambadzira kwauri neSMS, email, runhare, posvo uye zvemagariro midhiya uye madhijitari chiteshi (semuenzaniso, kushandisa WhatsApp uye HubSpot)
Zvichienderana neanodzora akakodzera, kupa ruzivo uye kuongororwa kwevatengi vedu kune vavanoshanda navo bhizinesi sechikamu chekupa zvigadzirwa kana masevhisi, kutibatsira kuvandudza zvigadzirwa kana masevhisi, kana kuongorora kana kugadzirisa mashandiro emabhizinesi edu.
Iko patinoda kugovana ruzivo rwako rwevanhu nevanhu kana masangano kuitira kuti tiite bhizinesi redu kana kutevedzera chero mutemo uye / kana zvisungo zvekutonga Muzviitiko zvese apo kufarira kwepamutemo kunovimbwa sehwaro hwepamutemo, tinotora matanho ekuona kuti yedu yepamutemo zvido hazviwedzerwe nekumwe kukanganisa kodzero dzako nerusununguko.
Kuteerera zvisungo zvedu zvepamutemo pasi pemutemo unoshanda, senge:
Kuchengeta zvinyorwa zvemitero
Kupindura subpoenas kana mvumo yekumanikidza
Kupa ruzivo kuzviremera zveveruzhinji.
Kuzivisa zvisungo nemasangano epamutemo
Kuongorora zviitiko sezvinodiwa nemutemo unoshanda
Nemvumo yako kana mvumo yakajeka, yakadai se:
Direct kushambadzira kutaurirana
Kutumira zvigadzirwa zvechigadzirwa kana zvehungwaru zvehungwaru
Kukutumira iwe kushambadzira kutaurirana uye ruzivo pane zvitsva zvigadzirwa, masevhisi uye zvinhu
Kutaurirana newe nezve, uye kugadzirisa kutora chikamu mumakwikwi, zvinopihwa kana kukwidziridzwa;
Kukumbira maonero ako kana mhinduro, kupa mikana yekuti iwe uedze software;
Kugadziriswa kwemhando dzakasarudzika dzemunhu ruzivo senge nezve hutano hwako, kana iwe uri mutengi anotambura
Zvekufarira veruzhinji, senge:
Kugadziriswa kwemapoka ako akasarudzika ehumwe ruzivo senge nezve hutano hwako, nhoroondo yematsotsi (kusanganisira mhosva dzinofungidzirwa), kana iwe uri mutengi anotambura
Kuzivisa kune Vatatu-Mapato
Karman achangogovana ruzivo rwako pachako uye ruzivo rwekushandisa chigadzirwa nekiriniki yako kana mupi wezvehutano uye nevatengesi vaKarman vanotengesa Karman Mawiricheya paunenge waita masevhisi anotora iro ruzivo. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve chero yemusoro wenyaya pazasi kana yedu yechitatu-bato maitiro mune zvese, ndapota taura nesu.
Isu tinotorawo ruzivo takamirira kiriniki kana mupi wevashandi vehutano iwe wawakasarudza kuendesa nekuchengetedza yedu Mawiricheya, kusanganisira ruzivo nezve kushandisa kwako Zvigadzirwa.
Zvichienderana nechigadzirwa kana sevhisi, isu tinoburitsa ruzivo rwemunhu:
Kune vedu vatatu-vevashandi vevashandi vanoita masevhisi vakamirira isu, senge makambani anotambira webhu, vatengesi vekutumira, analytics vanopa, uye vanopa ruzivo rwetekinoroji.
Kuchengetedzwa kwemitemo, zvimwe zviremera zvehurumende, kana mapato echitatu (mukati kana kunze kwenzvimbo yaunogara) sezvingabvumirwe kana kudikanwa nemitemo yedare chero ripi zvaro rinogona kushanda kwatiri; sezvakapihwa pasi pechibvumirano; kana sekufunga kwedu sezvakakodzera kupa rubatsiro rwepamutemo. Mumamiriro ezvinhu aya, isu tinotora kuedza kwakaringana kukuzivisa isu tisati tazivisa ruzivo runogona kukuzivisa iwe kana sangano rako, kunze kwekunge ziviso isati yarambidzwa nemutemo unoshanda kana isingakwanisike kana inonzwisisika mumamiriro ezvinhu.
Kune vanopa masevhisi, vanachipangamazano, vangangoita vadyidzani, kana vamwe vanhu vechitatu zvine chekuita nekutarisa, kutaurirana, kana kupedzisa kwekutengana kwatinowanikwa kana kusanganiswa neimwe kambani kana isu tinotengesa, kudzima, kana kuendesa zvese kana chikamu yemidziyo yedu.
Karman anogovera ruzivo rwako uye ruzivo rwekushandisa chigadzirwa nevatatu-mapato vanopa masevhisi kuna Karman, akadai sekugadzirisa ruzivo, manejimendi data manejimendi, kutsvaga kwevatengi uye mamwe masevhisi akafanana. Isu tinoda kuti ava vatatu-mapato vadzivirire ruzivo rwako uye vamanikidzwe, pasi pechibvumirano chakanyorwa, kuti vaite maererano nemirairo yedu, kutevedzera mutemo unoshanda uye kuita matanho akakodzera ehunyanzvi uye esangano rekuchengetedza ruzivo rwemunhu.
Karman anogovera ruzivo rwako pachako uye ruzivo rwekushandisa chigadzirwa nezvikamu zvaro zvemukati zvinoshanda sevatariri vanobatana kana mapurosesa. Karman ikambani yepasirese ine zvikamu zvepasirese. Nekuda kweizvozvo, yako ruzivo rwega inogona kugadziriswa nechero ipi yemapoka edu, kungave muEMEA, Asia, kana maAmerican sekutsanangurwa kwazviri muchikamu cheInternational Data Transfers.
Zvinogona kuve zvichidikanwa - nemutemo, maitiro epamutemo, kumhan'ara, uye / kana zvikumbiro kubva kuruzhinji nehurumende zviremera mukati kana kunze kwenyika yako yaunogara - ye Karman kuburitsa ruzivo rwako pachako. Isu tinodawo kuzivisa ruzivo nezvako kana tikaziva kuti nechinangwa chekuchengetedzwa kwenyika, kutevedzwa kwemutemo, kana zvimwewo zvinhu zvekukosha kweruzhinji, kuzivisa kunokosha kana kuti kwakakodzera. Patinogamuchira zvikumbiro zveruzivo, tinoda kuti zviperekedzwe nezvakakodzera magwaro akadai sesipo kana gwaro rekutsvaga. Isu tinotenda mukujeka sezvinobvumirwa nemutemo pamusoro peruzivo rwunokumbirwa kubva kwatiri. Isu tinonyatso tarisa chero chikumbiro chekuona hwaro hwepamutemo hwayo, uye isu tinogumira mhinduro yedu kune chete data rekuchengetedzwa kwemutemo inemvumo yepamutemo pakuferefetwa kwakati.
Isu zvakare tinofumura ruzivo nezve iwe kana tikaziva kuti kuzivisa kunokosha zvine mutsindo kumanikidza chero maEULAs; kuchengetedza mashandiro edu kana vamwe vashandisi; kana kana tikasungirwa kuti tidaro nemutemo upi noupi unoshanda, mutemo, mirau, kuendeswa kudare, kana imwe nzira yepamutemo. Pamusoro pezvo, muchiitiko chekubatanidzwazve, kubatanidzwa, kubhuroka kana kutengesa tinotamisa ruzivo rwese rwevanhu uye ruzivo rwekushandisa chigadzirwa isu tinotora kune akakodzera wechitatu-bato, sezvakakodzera.
Karman ikambani yepasi rese ine dzakasiyana siyana Mawiricheya inowanikwa zvichienderana nedunhu raunogara. Iri rinotevera runyorwa rwezvigadzirwa izvo Karman zvinopa mudunhu uye mune zvimwe zviitiko pasi rose. Kune mibvunzo ine chekuita nezve chero zvakanyorwa zvigadzirwa, ndapota bata wako mutengesi kana chiremba kuti uwane rumwe ruzivo. Iwe unogona zvakare kutibata.
Webhusaiti uye software
Yedu webhusaiti uye software inoshandisa mashoma ruzivo rwevanhu zvichienderana nekushandisa kwako Chigadzirwa. Ruzivo rwemunhu rwusina kukwana rwunogona kuunganidzwa kubva kwauri, mutengesi wako, kana wako mupi wezvehutano sezvazvinodiwa kuti akupe ruzivo rwakasarudzika, kuvandudza kuvimbika kwebasa, kurwisa spam kana imwe malware, kana kugadzirisa maficha uye mashandiro ewebhusaiti kana software. Isu hatishandisi yako data kune chero kushambadzira kana zvakafanana zvekutengesa zvinangwa pasina yako yakajeka mvumo.
Bhizinesi Dunhu reAmerica
Semugadziri wezvigadzirwa zvekurapa, Karman anogona kushanda semubatsiri wezvehutano pakusarudza mhando chaiyo kana saizi yechigadzirwa icho chinodiwa kune mumwe murwere. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve yedu HIPAA inoenderana maitiro, ndapota taura nesu pa: privacy@KarmanHealthcare.com.
Your California California Privacy
California Civil Code Chikamu 1798.83 inobvumidza vagari veCalifornia kukumbira rumwe ruzivo maererano nekuburitswa kwedu kweRuzivo rweMunhu kune vechitatu-mapato nekuda kwavo kwekushambadzira. Kuti uite chikumbiro chakadai, ndapota taura nesu pa: privacy@KarmanHealthcare.com.
Mutemo weCalifornia unoda kuti isu tiburitse pachena kuti Karman anopindura sei kubhurawuza rewebhu "Usateedzere" masaini kana dzimwe nzira dzinopa vatengi kugona kusarudza sarudzo maererano nekuunganidzwa kwemashoko anozivikanwa (sekureva kwezita iri mumutemo weCalifornia) nezve mutengi online zviitiko. Yedu Mawiricheya usatsigire izvozvi "Usatevera" kodhi. Ndokunge, Karman haapindure parizvino kana kutora chero danho maererano ne "Usatevera" zvikumbiro.
Kodzero dzako uye Sarudzo
Une dzimwe kodzero maererano neruzivo rwemunhu isu rwatinochengeta pamusoro pako. Isu zvakare tinokupa iwe dzimwe sarudzo nezve izvo zvemunhu ruzivo isu zvatinotora kubva kwauri, mashandisiro atinoita iro ruzivo, uye nematauriro atinoita newe. Kana iwe uine chero mibvunzo nezvekodzero dzako sezvakataurwa pazasi, kana uchida kushandisa kodzero dzako, ndapota taura nesu.
Unogona kushandisa chero kodzero dzako pane chero ipi zvayo nekutibata nesu kana kutumira fomu rekukumbira. Haufanire kubhadhara muripo kuti uwane ruzivo rwako pachako (kana kushandisa imwe yeimwe kodzero); zvisinei, tinogona kubhadharisa muripo unonzwisisika kana chikumbiro chako chiri pachena chisina hwaro, kudzokorora kana kunyanyisa. Neimwe nzira, isu tinogona kuramba kutevedzera chikumbiro chako mune aya mamiriro.
Tingave tichida kukumbira ruzivo rwakananga kubva kwauri kuti utibatsire kusimbisa hunhu hwako uye kuve nechokwadi chekodzero yako yekuwana ruzivo rwako pachako (kana kushandisa chero imwe yekodzero dzako). Ichi chiero chekuchengetedza kuve nechokwadi chekuti ruzivo rwemunhu harusi kuziviswa kune chero munhu asina mvumo yekuchigamuchira. Tinogona zvakare kutaura newe kuti tikubvunze iwe nerumwe ruzivo maererano nechikumbiro chako kuti tikurumidze mhinduro yedu.
Isu tinoedza kupindura kune zvese zviri pamutemo zvikumbiro mukati memwedzi mumwe chete wekarenda. Dzimwe nguva zvinogona kutitorera kupfuura mwedzi mumwe chete kana chikumbiro chako chakanyanya kuomarara kana iwe waita zvikumbiro zvakawanda. Mune ino kesi, isu tinokuzivisa iwe uye nekukuchengeta iwe uchivandudza.
Kodzero yekuziviswa nezve Mashandisiro Ekushandisa Ruzivo Rwako Pachako
Une kodzero yekuziviswa nezvemashandisiro atichaita uye nekugovana ruzivo rwako. Iyi tsananguro inozopihwa kwauri mune ipfupi, yakajeka, inonzwisisika uye nyore kufambidzana fomati uye ichanyorwa mumutauro wakajeka uye wakajeka.
Kodzero Yekuwana Rwako Ruzivo
Une kodzero yekuwana humbowo hwekuti tiri kugadzirisa ruzivo rwako pachako here, kuwana ruzivo rwako uye ruzivo maererano nemashandisirwo eruzivo rwako wega. Kodzero yekuwana ruzivo rwemunhu wega inogona kuderedzwa mune dzimwe nguva nezvinodiwa nemutemo zvemuno. Tichapindura kune zvese zvikumbiro kuti tiwane, tishandure, kana kudzima ruzivo rwako rwega sezvinodiwa nemitemo yemuno. Kuti ushandise kodzero idzi, tapota taura nesu.
Kodzero Yekuita Pasina Kukodzera Ruzivo rweMunhu Rwakagadziriswa kana Kugadziridzwa
Une kodzero yekuwana chero chakavanzika kana chisina kukwana ruzivo rwemunhu kugadziriswa. Kana isu takazivisa ruzivo rwakakodzera rwemunhu kune chero wechitatu mapato, isu tinotora matanho anonzwisisika kuzivisa iwo mapato echitatu nezve kururamisa pazvinogoneka
Kodzero Yekuti Une Rako Ruzivo
Yakadzimwa mune Dzimwe Mamiriro Une mvumo yekukumbira kuti ruzivo rwako rwega rurerwe kana:
unopokana nekugadziriswa kwemashoko ako ega, zvinoenderana nekodzero yako yekupokana uye isu hatina chakanyanya kufarira
kana ruzivo rwemunhu rwakagadziriswa zvisiri pamutemo nesu
ruzivo rwako rwemunhu runofanirwa kudzimwa kuti riteedzere chisungo chepamutemo pasi pemutemo unoshanda.
Tichatarisa chikumbiro chega chega zvakanyatsoenderana nezvinodiwa nemimwe mitemo ine chekuita nekugadziriswa kwemashoko ako ega. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve yako kodzero yekudzima, ndapota taura nesu.
Kodzero yekumanikidza Kugadziriswa kweRako Ruzivo Rwako
Une kodzero yekumanikidza kugadziriswa kwe data rako rega mune mamwe mamiriro. Izvi zvinosanganisira apo:
iwe unokwikwidza iko kurongeka kweruzivo rwemunhu, uye isu tinofanirwa kudzora kugadzirisa kweimwe nguva kuti tikwanise kuona chokwadi cheakakodzera dhata.
kugadzirwa kwacho hazvisi pamutemo, uye iwe unokumbira kurambidzwa kwekushandisa pane kudzima ruzivo rwemunhu
hatichadi ruzivo rwemunhu pachezvake nekuda kwekugadzirisa sekutaurwa kwazvinoitwa Tinoshandisa Sei Ruzivo Rwako chikamu muChiziviso ichi, asi ruzivo rwemunhu wega runodiwa newe kumisikidza, kushandisa kana kudzivirira zviri pamutemo murandu
wapokana nekugadzirisa zvichienderana nezvakarongwa pasi pechikamu cheRudyi rweChinhu, uye kusimbiswa kwedu kwezvikonzero zviri pamutemo kwakamirira
Kodzero yeData Portability
Mune mamwe mamiriro ezvinhu iwe unogona kukumbira kuti ugamuchire kopi yemunhu ruzivo nezve iwe yawakatipa (semuenzaniso nekuzadza fomu kana kupa ruzivo kuburikidza newebsite). Kodzero yekutakurika kwedatha inongoshanda chete kana kugadzirisa kwacho kuchienderana nemvumo yako kana kana data rako pachako richifanirwa kugadziriswa kuita chibvumirano uye kugadzirisa kwacho kunoitwa nenzira dze otomatiki (kureva zvemagetsi).
Kodzero yeKuramba kugadzirisa
Une kodzero yekupokana nekugadziriswa kweRuzivo rwako pachako mune mamwe mamiriro, kusanganisira kupi:
isu tiri kugadzirisa rako pachako data zvichibva pane zviri pamutemo zvido kana iko kuita kwebasa mukufarira veruzhinji
tiri kushandisa data rako pachako rekushambadzira zvakananga
ruzivo rwuri kugadziriswa kwesainzi kana nhoroondo yekutsvaga kana manhamba. Kana iwe ukakumbira kushandisa kodzero yako yekuramba, hatichakwanise kugadzirisa ruzivo rwega kunze kwekunge isu tichikwanisa kuratidza zvikonzero zvine musoro uye zvine musoro zvekugadziriswa kwakadai kunopfuura kufarira kwehukama.
Kana iwe ukaramba kugadzirirwa kwekushambadzira kwakananga, hatichazoitisa iko kugadzirisa.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, kunyangwe iwe uchiramba kumwe kugadziriswa, isu tinogona kuenderera nekugadzirisa kwakadaro kana zvichibvumidzwa kana kusungirwa kuzviita pasi pemutemo unoshanda, senge patinofanira kuzadzisa zvinodiwa nemutemo kana kuzadzisa zvisungo zvechibvumirano zvine chekuita nemunhu akanyoreswa.
Tinoda kukutumira iwe ruzivo nezve zvigadzirwa zvedu nemasevhisi angave anonakidza kwauri. Unogona kutiudza kuti tirege kukutumira zvekushambadzira kutaurirana chero nguva neemail nekudzvanya pane kuzvinyora chinongedzo mukati mekutengesa maemail iwe aunogamuchira kubva kwatiri kana nekutibata nesu sezvakarongwa pasi pe "Taura nesu”Pazasi.
Kupa uye Kubvisa Chibvumirano
Iwe unobvunzwa kuti upe mvumo yako kune kumwe kugadziriswa kwemashoko ako ega. Kana kugadzirisa kuchiitwa zvichibva nemvumo yako, kugadzirisa kwakadaro kunotaurwa muChiziviso ichi uye maererano nemirairo yakatarwa pano.
Unogona kubvisa chero mvumo yawakatipa kare yekugadzirisa ruzivo rwako. Paunenge wabvisa mvumo yako, isu ticharega kugadzirisa ruzivo rwako rwega rwakabatana nemvumo yako uye nekuda kwezvinangwa zvakajeka sezvakataurwa pano.
Ndokumbira utarise kuti kunyangwe iwe ukabvisa mvumo yako kune zvimwe zvinangwa zvekugadzirisa, isu tinogona kuenderera mberi nekugadzirisa rumwe ruzivo rwemunhu kune zvimwe zvinangwa apo isu tine chimwe chikonzero chepamutemo chekuzviita. Izvi zvinogona kusanganisira kugadzirisa kuzadzisa chibvumirano chibvumirano maererano newe nezve Zvigadzirwa zvedu kana patinosungirwa zviri pamutemo maererano nemutemo unoshanda kuti tidaro.
Maitiro Ekushandisa Sei Kodzero Dzako
Unogona kushandisa chero kodzero dzako chero nguva nekutibata nesu kana kutumira fomu rekukumbira. Ndokumbira utarise kuti tinogona kutaura newe uye tinokukumbira kuti usimbise hunhu hwako kuti uve nechokwadi chekuti isu hatizivise ruzivo rwako pachako kune chero munhu asina mvumo. Tinogona kukubvunza kuti utaure chikumbiro chako tisati taita chero zviito. Kana tangosimbisa kuzivikanwa kwako, tichabata chikumbiro chako zvinoenderana nemutemo unoshanda. Ndokumbira utarise kuti kunyangwe iwe uchiramba kumwe kugadziriswa kweruzivo rwevanhu, tinogona kuenderera mberi nekugadzirisa kana zvichibvumidzwa kana zvichidikanwa kuti zviitwe nemutemo, senge pazvinenge zvichidiwa kuzadzisa zvinodiwa nemutemo.
Dziviriro Dhata yeVana
Isu takazvipira kuchengetedza data revana uye nekukupa iwe sarudzo nezvekuti data remwana wako riri sei kana kuti harishandiswe. Isu tinoteera epasirese dziviriro yedata mitemo sezvo ivo vachireva kune zvakavanzika zvevana pazvinoshanda kuKarman Zvigadzirwa, senge iyo United States 'Yevana Online Kuvanzika Kudzivirirwa Mutemo. Isu hatisi kuziva ruzivo rwevanhu kubva kuvana pasina mvumo yakakodzera yevabereki kana yemuchengeti.
Kana iwe uchidavira kuti tingave takaunganidza ruzivo rwemunhu kubva kune mumwe munhu ane makore ari pasi pegumi nematanhatu (16), kana zera rakaringana pazera zvichienderana nesimba rako, pasina mvumo yevabereki kana yemubatsiri, ndapota tiudze kushandisa nzira dzakatsanangurwa muchikamu chekuBata nesu uye isu tichatora matanho akakodzera ekuongorora nekugadzirisa nyaya nekukasira.
Dziviriro yeData uye Dziviriro Dziviriro
Isu tinoshandisa maindasitiri-akajairwa matekinoroji, senge mafirewwall, nzira dzekunyorera, uye maitiro echokwadi, pakati pevamwe, akagadzirirwa kuchengetedza kuchengetedzeka kwemashoko ako ega uye kuchengetedza maKarman maakaunzi nemahurongwa kubva mukubvumidzwa kusingabvumirwe.
Kunyangwe isu tichiedza kuchengetedza ruzivo rwako rwega rwakachengeteka, hapana matanho ekuchengetedza akakwana, uye hatigone kuvimbisa kuti ruzivo rwako pachako haruzomboburitswa nenzira isingaenderane neChiziviso ichi (semuenzaniso, semhedzisiro yezviito zvisina mvumo zvakaitwa nevanhu vechitatu vanotyora mutemo kana chiziviso ichi).
Karman haina kana nzira yekuzvidavirira kune chero zvirevo kana kurasikirwa kwerudzi rupi zvaro zvine chekuita nekushandiswa kana kushandisa zvisirizvo kweYako ID ID nekuda kwezviitiko zvevatatu-vekunze kunze kwekutonga kwaKarman kana nekuda kwekutadza kwako kuchengetedza zvakavanzika uye chengetedzo yeWako ID ID . Isu hatina mhaka kana mumwe munhu achiwana account yako kuburikidza neruzivo rwekunyoresa rwavakawana kubva kwauri kana kuburikidza nekutyorwa newe kweichi Cherechedzo kana iyo EULA. Kana iwe uine hanya-zvine chekuita nezve chengetedzo, ndapota email email@KarmanHealthcare.com.
Karman inogona kugadzirisa Chiziviso ichi nguva nenguva. Kana isu tikachinja nenzira yechinhu, chiziviso chinozotumirwa pawebhusaiti yedu pamwe neyakavandudzwa ziviso.
Chii chinoitika kana paine shanduko muridzi?
Ruzivo nezve vatengi vedu nevashandisi, kusanganisira ruzivo rwemunhu, runogona kugoverwa uye kuendeswa sechikamu chekubatana kupi, kuwanikwa, kutengeswa kwemidziyo yekambani kana shanduko yebasa kune mumwe mupi. Izvi zvinoshandawo muchiitiko chisingafungidzike chekusagona kubhadhara mari, kubhuroka kana kugashira umo vatengi nemarekodhi evashandisi aizoendeswa kune rimwe sangano nekuda kwekuita kwakadaro.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana zvinetsekana nezveKarman's ziviso kana kugadziriswa kwedata kana kana iwe uchida kuita chichemo pamusoro pekutyora kunogona kuitika kwemitemo yekuvanzika, ndapota taura nesu kushandisa zvinotevera:
Nhoroondo ye KARMAN HEALTHCARE INC
GUTA RENYAYA, CA 91748
Iwe unogona zvakare kutibata nesu nerunhare kune inoenderana nhamba yevatengi yekutsigira nhamba. Zvese kutaurirana kwakadai kunoongororwa, uye mhinduro dzinopihwa pazvinenge zvakakodzera nekukurumidza sezvazvinogona. Kana iwe usina kugutsikana nemhinduro yakagamuchirwa, unogona kutumira chichemo chako kune akakodzera mutongi mudunhu rako. Kana iwe ukatibvunza isu, tichaita zvatinogona kuti tikupe iwe ruzivo iwe rwaunoda.